|lọ | MRU MEDIA
Oghere & mbara igwe
Ihe ọhụrụ mepụtara
Jenetik & DNA
Ahụmịhe Na -enweghị Atụ
Phenomena na -enweghị nkọwa
Ebe A Na-ezokarị
Akụkọ banyere obodo
Mpụ a na-edozighi
Okwu enweghị nkọwa
Ihe omimi akụkọ ihe mere eme
Mpụ ndị jọgburu onwe ha
Ndị na-egbu Sial
Omenala ndị dị egwu
Ọkwa Ezi Ihe
Ọ bụ ndị dike oge ochie mere iwu ugwu nta chọkọlet na Philippines?
Nan Madol: Obodo hi-tech dị omimi wuru 14,000 afọ gara aga?
Ihe omimi Rongorongo nke Easter Island
Nnukwu Pyramid nke Xian: Gịnị kpatara China ji edebe pyramid ya na nzuzo?
Triangle Bridgewater - Triangle Bermuda nke Massachusetts
Ihe omimi Rök Runestone dọrọ aka ná ntị banyere mgbanwe ihu igwe n'oge dị anya gara aga
Ụlọ elu nke okpokoro isi: Ịchụ mmadụ n'àjà na omenala Aztec
Maapụ kpakpando dị afọ 40,000 nwere ihe ọmụma dị omimi banyere mbara igwe ọgbara ọhụrụ
The Sumerian Planisphere: A forgotten star map that remains unexplained to this day
Rapanui Society gara n'ihu mgbe oke ọhịa nke Ista Island gasịrị
Ihe omimi dị mgbagwoju anya nke ukwu ukwu Ain Dara: Akara Anunnaki?
Akụkọ banyere Anunnaki na Nibiru: Ihe nzuzo zoro ezo n'azụ mmalite nke mmepeanya anyị?
Ihe amaghi 'megastructure ọbịa' gbara kpakpando Tabby gburugburu!
Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na ha ahụla ibe nke mbara ala ọzọ na Algeria
Red dwarfs nwere ike ịnwe mbara ala na -anabata ndụ ndị ọbịa, ndị ọkà mmụta sayensị na -atụ aro
Na -efu oghere ojii ugboro iri karịa nke anwụ
Ekwensu Ekwensu - anụ ọhịa kacha dị omimi nke a hụtụrụla!
J. Marion Sims: 'Nna nke Gynecology ọgbara ọhụrụ' mere nnwale na -awụ akpata oyi n'ahụ ndị ohu
Ndepụta oge nke ihe omume Bermuda Triangle kacha nwee aha
Ọnụ nwanyị nwanyị Seoul dị afọ 63 na-atụrụ ime site na squid
Ọ bụ ndị ala ọzọ mere okirikiri ihe ubi ??
Ihe omimi nke ọnụ ụzọ Aramu Muru
14 ụda dị omimi nke a na -akọwaghị ruo taa
The Granny Ripper: Tamara Samsonova, ajọ onye na -egbu ihe nrịba ama nke Russia nke gbagburu mmadụ iri na anọ!
Ella Harper - Akụkọ a na -akọwaghị banyere nwa kamel
Saturday Mthiyane: Nwa anụ ọhịa
Nkume Ingá: Ozi nzuzo sitere na mmepeanya oge ochie dị elu?
Ejiri igwe dị elu wee wuo pyramid nke Egypt, ihe odide ochie sitere na 440 BC kpughere
Banye Banyere Akwụkwọ Akụkọ Anyị
Nweta ọkwa maka ọkwa mgbasa ozi kacha mma kwa izu.
Site na ịlele igbe a, ị na -egosi na ị gụọla ma na -ekwenye na usoro ojiji anyị gbasara nchekwa data esitere na mpempe akwụkwọ a.
EKPERE MRU MEDIA | 2017-2021
Anyị na -eji kuki na weebụsaịtị anyị iji nye gị ahụmịhe kachasị mkpa site na icheta mmasị gị na ịmegharị nleta ugboro ugboro. Site na ịga n'ihu na saịtị anyị, ị kwenyere n'iji kuki niile.
GỤKWUOMechie & Nabata ⟶